ကားပါဝါတိုးမြင့်စေမယ့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုယ်တိုင် Upgrade လုပ်ဖို့ - Optima Werkz Yangon
In General Knowledge, Tuning
သင့်ရဲ့ကားတစ်စင်းအတွက် အမြင့်မားဆုံး အမြန်နှုန်းရရှိဖို့၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကနေ မြင်းကောင်ရေ စွမ်းအား တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ဆိုရင် ကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးက လိုက်ဖက်ညီစွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကားအမျိုးအစားအတွက် ဘယ်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ပေါင်းစပ်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းခံဖို့ လိုအပ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် တစ်ခါကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ Modify လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို အရင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
မိမိကားအင်ဂျင်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှာဖွေပြီး စွမ်းအားမြှင့်တင်ဖို့အတွက် မြင်းကောင်ရေ စွမ်းအား တိုးမြင့်ခြင်းကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်ကာ ပုံမှန်မောင်းနှင်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် လောင်စာကုန်ကျမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ကောင်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးအရမ်းမကုန်ကျ၊ အလုပ်အရမ်းမရှုပ်ဘဲ ကိုယ့်ကားအင်ဂျင်ရဲ့ မြင်းကောင်ရေအားကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက် အကြံပေးချင်တာကတော့ …
၁. Performance Air Filter ကိုပြောင်းသုံးပါ – မြင်းကောင်ရေအားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုရင် အင်ဂျင်ထဲကို လေနဲ့ လောင်စာတွေ ပိုပြီး ဖြတ်သန်းဖို့ လိုပါတယ်။ Performance Air Filter ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ထားရင် အင်ဂျင်ထဲကို ပိုပြီး လေဝင်လေထွက် လွတ်လပ်ကောင်းမွန်စေမှာပါ။
၂. Cold-Air Intake စနစ် ထည့်ပါ – Cold-air Intake (CAI) system ဟာ ပြင်ပလေအေးတွေကို အင်ဂျင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်စေပါတယ်။ (ပြင်ပက ဝင်လာတဲ့ လေအေးတွေက ပိုသိပ်သည်းပြီးတော့ စွမ်းအင်ပိုထွက်စေတယ်)
၃. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အိပ်ဇောစနစ် ထည့်ပါ – ကားစွမ်းရည်မြင့်လာတဲ့အမျှ ပိုများလာမယ့် အင်ဂျင်ထဲက လေပူတွေကို ထုတ်ပစ်ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ cat-back exhaust system တစ်ခုနဲ့ အိပ်ဇော Headers ကို ထည့်သွင်းထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ headers တွေထည့်သွင်းတော့မယ်ဆိုရင် ကားအစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ခေတ္တဖယ်ရှားရခြင်း စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ အချိန်ယူရတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားရပါမယ်။
၄. လောင်စာသယ်ပို့မှုကို ပြောင်းလဲပါ – လောင်စာဆီ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရတဲ့ ယာဉ်တွေမှာတော့ လောင်စာ သယ်ယူစီးဆင်းမှုစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးလုပ်လို့ ရတာ မရှိပါဘူး။ ကာဘရိုက်တာတွေနဲ့ မော်ဒယ်ဟောင်း တွေမှာတော့ Aftermarket ကာဘရိုက်တာ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲခြင်းက စွမ်းရည်ပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကာဘရိုက်တာကို Intake Manifold ထက် တစ်လက်မလောက် မြှင့်တင်ပေးမယ့် Phenolic Riser တစ်ခုကိုလည်း လိုချင်ကောင်းလိုချင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လောင်စာနဲ့ လေအား စီးဆင်းမှုအရှိန်ကို ပိုထုတ်ပေးနိုင်သလို ကာဘရိုက်တာအား အင်ဂျင်အပူရှိန်နဲ့ အနည်းငယ်ဝေးသွားစေတဲ့အတွက် လောင်စာထဲကို ပိုအေးတဲ့ လေကို ရောစပ်နိုင်စေမယ်။
၅. ကွန်ပျူတာစနစ်တွေကို Reprogram ပြန်ချိန်ညှိပါ – ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ် ပါဝင်တဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ ယာဉ်တွေမှာ ပြန်လည် Reprogram ပြုလုပ်ခြင်းက Timing ကိုတိုးတက်စေပြီး လောင်စာပေးပို့စီးဆင်းမှုကို ပိုမို ထိရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အတိအကျ လိုက်နာဖို့ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ကားကို အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားကျန်းမာရေးအတွက် စစ်ဆေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကားအမျိုးအစား မျိုးစုံကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနိုင်တဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆက်သွယ်လိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ကားတဈစငျးအတှကျ အမွငျ့မားဆုံး အမွနျနှုနျးရရှိဖို့၊ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့ပေးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှေ ကနေ မွငျးကောငျရေ စှမျးအား တိုးမွှငျ့ပေးဖို့ ဆိုရငျ ကားရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှေ အားလုံးက လိုကျဖကျညီစှာ အလုပျလုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျ့ကားအမြိုးအစားအတှကျ ဘယျပစ်စညျး အစိတျအပိုငျးတှေ ပေါငျးစပျတာက အကောငျးဆုံး ဖွဈမလဲဆိုတာကို ကြှမျးကငျြသူတှဆေီက အကွံဉာဏျတောငျးခံဖို့ လိုအပျပွီး၊ အထူးသဖွငျ့ တဈခါကို အစိတျအပိုငျးတဈခုပဲ Modify လုပျမယျဆိုရငျ ဘယျအစိတျအပိုငျးကို အရငျပွောငျးလဲသငျ့တယျဆိုတာ သိထားသငျ့ပါတယျ။
မိမိကားအငျဂငျြရဲ့ အမွငျ့ဆုံးစှမျးဆောငျရညျကို ရှာဖှပွေီး စှမျးအားမွှငျ့တငျဖို့အတှကျ မွငျးကောငျရေ စှမျးအား တိုးမွငျ့ခွငျးကို လလေ့ာရမှာ ဖွဈကာ ပုံမှနျမောငျးနှငျနတေဲ့ အခြိနျမှာတောငျ လောငျစာကုနျကမြှုကို လြော့ခပြေးနိုငျကောငျး ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ငှကွေေးအရမျးမကုနျကြ၊ အလုပျအရမျးမရှုပျဘဲ ကိုယျ့ကားအငျဂငျြရဲ့ မွငျးကောငျရအေားကို တိုးမွှငျ့နိုငျဖို့အတှကျ အကွံပေးခငျြတာကတော့ …
၁. Performance Air Filter ကိုပွောငျးသုံးပါ – မွငျးကောငျရအေားနဲ့ စှမျးဆောငျရညျ တိုးမွှငျ့ဖို့ဆိုရငျ အငျဂငျြထဲကို လနေဲ့ လောငျစာတှေ ပိုပွီး ဖွတျသနျးဖို့ လိုပါတယျ။ Performance Air Filter ပွောငျးလဲတပျဆငျ ထားရငျ အငျဂငျြထဲကို ပိုပွီး လဝေငျလထှေကျ လှတျလပျကောငျးမှနျစမှောပါ။
၂. Cold-Air Intake စနဈ ထညျ့ပါ – Cold-air Intake (CAI) system ဟာ ပွငျပလအေေးတှကေို အငျဂငျြထဲသို့ ဝငျရောကျစပေါတယျ။ (ပွငျပက ဝငျလာတဲ့ လအေေးတှကေ ပိုသိပျသညျးပွီးတော့ စှမျးအငျပိုထှကျစတေယျ)
၃. စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ အိပျဇောစနဈ ထညျ့ပါ – ကားစှမျးရညျမွငျ့လာတဲ့အမြှ ပိုမြားလာမယျ့ အငျဂငျြထဲက လပေူတှကေို ထုတျပဈဖို့ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားတဲ့ cat-back exhaust system တဈခုနဲ့ အိပျဇော Headers ကို ထညျ့သှငျးထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ headers တှထေညျ့သှငျးတော့မယျဆိုရငျ ကားအစိတျအပိုငျးအခြို့ကို ခတ်ေတဖယျရှားရခွငျး စတာတှေ ပါဝငျတဲ့ အခြိနျယူရတဲ့ အလုပျတဈခု ဖွဈသှားနိုငျတယျ ဆိုတာကိုတော့ သိထားရပါမယျ။
၄. လောငျစာသယျပို့မှုကို ပွောငျးလဲပါ – လောငျစာဆီ တိုကျရိုကျထညျ့သှငျးရတဲ့ ယာဉျတှမှောတော့ လောငျစာ သယျယူစီးဆငျးမှုစနဈနဲ့ ပတျသကျပွီး အမြားကွီးလုပျလို့ ရတာ မရှိပါဘူး။ ကာဘရိုကျတာတှနေဲ့ မျောဒယျဟောငျး တှမှောတော့ Aftermarket ကာဘရိုကျတာ တဈခုကို ပွောငျးလဲခွငျးက စှမျးရညျပိုငျးမှာ ကွီးမားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုကို ပေးနိုငျပါတယျ။ ကာဘရိုကျတာကို Intake Manifold ထကျ တဈလကျမလောကျ မွှငျ့တငျပေးမယျ့ Phenolic Riser တဈခုကိုလညျး လိုခငျြကောငျးလိုခငျြပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလို မွှငျ့တငျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ လောငျစာနဲ့ လအေား စီးဆငျးမှုအရှိနျကို ပိုထုတျပေးနိုငျသလို ကာဘရိုကျတာအား အငျဂငျြအပူရှိနျနဲ့ အနညျးငယျဝေးသှားစတေဲ့အတှကျ လောငျစာထဲကို ပိုအေးတဲ့ လကေို ရောစပျနိုငျစမေယျ။
၅. ကှနျပြူတာစနဈတှကေို Reprogram ပွနျခြိနျညှိပါ – ကှနျပြူတာထိနျးခြုပျစနဈ ပါဝငျတဲ့ အငျဂငျြနဲ့ ယာဉျတှမှော ပွနျလညျ Reprogram ပွုလုပျခွငျးက Timing ကိုတိုးတကျစပွေီး လောငျစာပေးပို့စီးဆငျးမှုကို ပိုမို ထိရောကျမှု ရှိစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွုလုပျမယျဆိုရငျတော့ ညှနျကွားခကျြတှကေို အတိအကြ လိုကျနာဖို့ ဂရုစိုကျရမှာပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ ကားကို အဆငျ့မွှငျ့တငျခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကားကနျြးမာရေးအတှကျ စဈဆေးခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ ကြှမျးကငျြသူတှေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ ကားအမြိုးအစား မြိုးစုံကို ကြှမျးကငျြစှာ ပွုပွငျမှမျးမံပေးနိုငျတဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆကျသှယျလိုရငျတော့ ဖုနျးနံပါတျ +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။